TILMAAMO WAX TAR LEH: Dhamaan TILMAAMAHA aad uga baahan tahay si aad iskaga jirto caabuqa CORONA! (Fadlan sii faafi) | Hadalsame Media
Home Caafimaadka TILMAAMO WAX TAR LEH: Dhamaan TILMAAMAHA aad uga baahan tahay si aad...
TILMAAMO WAX TAR LEH: Dhamaan TILMAAMAHA aad uga baahan tahay si aad iskaga jirto caabuqa CORONA! (Fadlan sii faafi)
(Muqdisho) 16 Maarso 2020 – Wasaaradda Caafimaadka DF Somalia ayaa haatan ku dhawaaqday inay heshay kiiskii koowaad oo ah caabuqa corona ee lagu arko gudaha Somalia.
Wasiiradda Caafimaadka Somalia, Dr Foowsiya Abiikar, ayaa barteeda Twitter-ka kusoo qortay sidatan:
”Kaddib karantiil iyo baaritaan aan ku samaynnay muwadaniintii afarta ahayd ee ka yimid dalka china usbuucii hore waxa aan xaqiijinayaa in mid ka mid ah muwaadiniintaas laga helay cudurka caabuqa faafa.”
Wasiiradda oo sii hadlaysa ayaa waxay raacisay: ”Wasaaraddu waxay ka shaqaynaysaa xakamaynta cudurka.”
Somalia ayaa ah dal aan lahayn kaabayaal saaxi ah oo si wax ku ool u shaqaynaya, iyadoo aanay jirin siyaasad isku xiran oo hal go’aan ku shaqaysa, taasoo sii ragaadinaysa in la hagaajiyo kaabayaashaas.
Dalalka deriska ah ee Kenya iyo Itoobiya ayaa dhowaan iyagana laga sheegay cudurka, iyadoo ay DF Somalia ka gaabisay soo jeedinno ahaa in la xirro duullimaadyada ka imanaya.
Haddaba, halkan hoose ka daalaco tilmaamo aannu ka diyaarinnay cudurkan halista ah ee corona, si aad ugu dadaasho badbaadada naftaada iyo inta kugu hareeraysan. Halkan ka daalaco tilmaamaha.
Ka dib karantiil iyo baaritaan aan ku samaynnay muwadaniintii afarta ahayd ee ka yimid dalka china usbuucii hore waxa aan xaqiijinayaa in mid ka mid ah muwaadiniintaas laga helay cudurka caabuqa faafan. Wasaaraddu waxay ka shaqaynaysaa xakamaynta cudurka.
— Dr Fawziya Abikar (@AbikarDr) March 16, 2020
Previous articleSomalia oo muddo 30 sano ka badan uu hal go’aan maanta ka hirgalay!
Next articleMaamulka Somaliland oo muujiyay inay ciyaar siyaasadeed kala muhiimsan tahay caabuqa halista ah ee caalamkii caloosha u dhigay! (Arag sababta)